Shona MUCHERECHEDZO WECHIKARA! Mubhuku raZvakazarurwa (bhuku rokupedzisira reBhaibheri Holy) tiri zvakasimba akanyevera kugamuchira chiratidzo chechikara (i.e. kwaAntikristu!). Asi chii chaizvo chiri mucherechedzo wechikara? Uye anoita mucherechedzo ichi chinhu chokuita zita rechikara kana nhamba 666? Kana, chiratidzo CHIKARA chinhu yakatosiyana & vakaparadzana zita CHIKARA uye nhamba 666? Uye chii chaizvo ndiro zita CHIKARA zvakadaro? Ko munhu, rudzi, boka rendudzi, kana chechi? Uye zvakadini ichi chiratidzo-chinhu chaichoicho, MUMUVIRI MAKO? Kana kuti pachinzvimbo kuva rokufananidzira, kwokufananidzira chinangwa? Ngatitange kure pakutsvaka kwedu kupindura mibvunzo iyi yokutanga pakona kuna Zvakazarurwa 13: 16-17. Pano tinoudzwa kuti CHIKARA "waida kuti munhu wose-vaduku nevakuru, vafumi nevarombo, vakasununguka nevakasungwa, kuti vapiwe mucherechedzo muruoko rworudyi kana pahuma. Uye hapana aigona kutenga kana kutengesa chinhu pasina kuti MAKO, chakanga MUNOGONA THE zita rechikara kana chiverengo  rinomirira ZITA RAKE "(BSN). Naizvozvo rugwaro urwu zvinoita zvakakwana pachena kuti chiratidzo Chechikara chinongova kana zita rechikara kana chiverengo kuti anomirira zita rake. Naizvozvo, vane chiratidzo chechikara pamusoro pako kwakafanana ane zita rechikara pamusoro pako (kana NUMBER inomiririra rake zita-666!). NUMER CHECHIKARA-666! Asi nei nhamba 666? nhamba iyi sei anomiririra zita rake? Eya, ngationei regai Bhaibheri kupindura mubvunzo iwoyo. Zvakazarurwa 13:18 (LB) - "... vanhu kusanganiswa tsika mavara muzita rake kuwedzera 666." Rugwaro Izvi zvinoratidza pachena kuti 666 kunongova kusanganiswa Verengai kukosha zita rechikara! Somuenzaniso, tora zita "VIX." Kana tikashandisa "sezviverengo Roman" Ipapo V = 5, I = 1, & X = 10. Zvadaro kana tinoisa vakakwira kusanganiswa ukoshi tsamba imwe neimwe iri zita (5 + 1 + 10) patinokura 16. Naizvozvo, Vix zvaisagona Chipuka nokuti zita rake chete anowedzera kuti 16 (apo zita rechikara kuchawedzera kusvika 666). Asi kana Vix haazi Chipuka, ndiani? NDIANI CHIKARA? Saka ndiani Chikara ichi (i.e. kwaAntikristu)? Ko mumwe United European Superpower (a ukavandudzwa "Vatsvene" Roman Empire) sezvo vamwe unodzidzisei? Kana Chipuka mutungamiri ichi chakava ezvinhu? Chikara ndeyokufananidzira zvose-zvose umambo uye mutungamiri waro! Asi pakutanga nezvarinomiririra yayo MUTUNGAMIRIRI. Kuti aratidze kuti zvarinomirira yokupedzisira enyika mutungamiriri ino nokukurumidza-kuuya ngativhurei mumwe Gwaro mubhuku raZvakazarurwa. Zvakazarurwa 19: 20- "Ipapo chikara yakatorwa, uye pamwechete naye nomuprofita wenhema .... vaviri ava vakakandirwa vari vapenyu mugomba remoto unopfuta nesarufa "(NKJ). Gwaro iri rinoratidza zvakajeka kuti CHIKARA anomirira kupera-nguva EGA, nokuti iye muprofita wenhema vari mudziva remoto! CHAIWO, CHAIZVO MAKO? Asi chii chaizvo chiri mucherechedzo CHIKARA, chiratidzo yokupedzisira mutungamiri ino enyika? Uchava MUMUVIRI, chaiwo MARK (kana uri mucherechedzo ichi chete dimikira, kuva zvakavigwa dzimwe mhando, usingaonekwi rinoreva)? Mucherechedzo wechikara chichabudirira zvechokwadi. kuva chaiyoiyo chaiko chiratidzo! Muna Zvakazarurwa 13:16 & 14:11 shanduro dzakawanda siyana dzeBhaibheri (BSN, NOG, EXB, NEB, & kuti JB) mamiriro kuti chiratidzo CHIKARA achava "vakapiswa" riri vanhu. The AMPC, BSN, & kuti EXB hurumende kuti chiratidzo Chechikara achapiwa ndokutsika pamusoro pavanhu. Asi Ndinofarira nzira Bhaibheri Living anoshandurwa idzi ndima mbiri zvakanakisisa, sezvo anozivisa kuti chiratidzo CHIKARA achava "nyora" riri vanhu! Asi zvisinei kana chiratidzo mhuka vakapiswa, nokutsikisa, kana nyora, vose shanduro idzi vachibvumirana vanobvuma kuti chiratidzo richava chaiyoiyo MUMUVIRI MAKO kuti vamwe nyore kukwanisa kuona! KUGAMUCHIRA MARK = MUTEVERI SATANI! Kana ukaverenga bhuku raZvakazarurwa vanyatsohuongorora (kunyanya chitsauko 14) uchaona kuti munhu AIDA anogamuchira chiratidzo chechikara kwakaomarara kurangwa naMwari. Asi Mwari zvirokwazvo HAVAZOZVIZIVI kuranga munhu ane mucherechedzo ichi muviri kumanikidzwa pamusoro pavo, kana iye acharanga munhu asingazivi anogamuchira mucherechedzo uyu (sezvo vamwe rangano theorists kudzidzisa)! Munhu anofanira vachiziva, AIDA BVUMA MAKO. Asi ani naani AIDA uye vachiziva anobvumira mucherechedzo wechikara kuiswa muviri wake (kana paruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo) achange zvakananga pamusoro Mwari! Pane kuteerera Musiki wavo, ivo vachava pachinzvimbo kuva kuteerera Satani! Vachava Chaizvoizvo kuva pledging kuvimbika kwavo uye kuvimbika kwavo kuna Satani Dhiyabhorosi (ona Zvak 13:16 muna zvose BSN & EXB shanduro dzeBhaibheri)! Uye vaya vanoita vachabvumirwa zvakasimba kurangwa naMwari! Uye ivo vachava nemanzvengero; nokuti kwete chete zvichavapo zvapupu zviviri (kana vaporofita) uyo udza kwete kunamata Chipuka (kana chifananidzo chake) kana kugamuchira mucherechedzo wake kwavari, asi ngirozi kudenga vachakuitiraiwo kuraira vagere munyika kwete kuita kudaro (Zvakazarurwa 14: 9)! ZITA RECHIKARA? Saka, chii zita Chechikara? Uye ndiani magumo-nguva mutungamiri ichi enyika kuva? Ani naani ari mumwe chinhu Tinozviziva, mabhii zita rake kuchawedzera kusvika 666! Asi unogona munhu kufunga zita nani kupfuura ROMAN? Chokutanga, "ROMAN" rinogona kushandurwa kuti "LATEINOS" mumutauro wechiGiriki. (Asi nei vanoshandisa mutauro wechiGiriki? Nokuti vakawanda Testamende Itsva pakutanga yakanyorwa nechiGiriki-kusanganisira bhuku raZvakazarurwa). Mumutauro wechiGiriki "L" anomiririra nhamba 30, "A" ari 1, "T" ndiyo 300, "E" ndizvo 5, "Ini" ari 10, "N" ari 50, "O" 70, uye " S "ari 200. Add kundovaisa (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) uye chii iwe kuwana? 666! Chechipiri, kana zita rake aiva "ROMAN," zvingava yakafanana dzidziso yeUtatu sezvaringaita kumirira zvinhu zvitatu mune imwe. Kwete chete kaisazova zita iri yokupedzisira-nguva mutungamiriri wezvematongerwe enyika, asiwo vaizomiririra hweRoma uyewo MUROMA (Catholic) Church. YAMBIRO! Hazvinei nezvaunoita mune ramangwana, HAKUNA (chero zvaita zvose!) Kugamuchira chiratidzo chechikara kana vanomunamata (i.e. kwaAntikristu) kana chifananidzo chake !!! "Vana vaduku, iawa yokupedzisira; uye sezvo makanzwa ... kwaAntikristu anouya ... The munhu chivi ... mwanakomana wokurashika, unopikisa nekuzvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa ... Achaita kunyange kugara tembere yaMwari, achiti iye pachake ndiye Mwari "(1 Johani 2:18 NKJ; 2 VaT 2: 3-4 NKJ; 2 VaT. 2: 4. BSN). "Ipapo akazarura muromo wake chimhure Mwari, kuti chimhure zita rake, tabhenakeri rake, uye vaya vanogara kudenga. Uye rakabvumirwa kwaari kuti hondo nevatsvene [vaKristu YECHOKWADI] uye kukunda [hwaizoikunda] kwavari. Uye simba rikapiwawo kwachiri pamusoro perudzi rwose nerurimi nerudzi. Uye vose vanogara panyika vachachinamata, vane mazita asina kunyorwa mubhuku roupenyu ... "(Zvak 13: 6-8 NKJ). "Kana munhu akanamata chikara [i.e. kwaAntikristu] nomufananidzo wake [i.e. ake pechifananidzo], uye anogamuchira mucherechedzo pahuma yake kana paruoko rwake, iye amene anofanira uyewo waini yekutsamwa kwaMwari, yakadirwa simba rizere mumukombe wekutsamwa kwake. Uye ucharwadziswa nemoto nesarufa pamberi pevatumwa vatsvene uye pamberi peGwayana [i.e. Jesu Kristu]. Zvino utsi hwokurwadziwa kwavo hunokwira nokusingaperi-peri, uye havana zororo masikati kana usiku, ivo vanonamata chikara nemufananidzo wacho, nani nani unogamuchira mucherechedzo wezita "(Zvak 14: 9-11 NKJ). Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro mucherechedzo wechikara, tapota verenga "Zvakazarurwa Runouya Mupenyu" uye mabhuku aya anowanikwa FREE pa "Munhu Anopesana naKristu & The Final 7 Makore.": www.TheBibleComesAlive.com shona = shona Kana uchida kuverenga chero nyaya yangu kana mabhuku mumutauro wenyu, chete tinya anotevera kubatana: https://translate.google.com. Link Izvi zvichaita kushandura vose zvinyorwa wangu Chirungu kuti mutauro wako. Asi unogona chete kushandura 1 peji panguva. — Other Books & Articles in Your Language — If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.
Mubhuku raZvakazarurwa (bhuku rokupedzisira reBhaibheri Holy) tiri zvakasimba akanyevera kugamuchira chiratidzo chechikara (i.e. kwaAntikristu!). Asi chii chaizvo chiri mucherechedzo wechikara? Uye anoita mucherechedzo ichi chinhu chokuita zita rechikara kana nhamba 666? Kana, chiratidzo CHIKARA chinhu yakatosiyana & vakaparadzana zita CHIKARA uye nhamba 666? Uye chii chaizvo ndiro zita CHIKARA zvakadaro? Ko munhu, rudzi, boka rendudzi, kana chechi? Uye zvakadini ichi chiratidzo-chinhu chaichoicho, MUMUVIRI MAKO? Kana kuti pachinzvimbo kuva rokufananidzira, kwokufananidzira chinangwa?
Ngatitange kure pakutsvaka kwedu kupindura mibvunzo iyi yokutanga pakona kuna Zvakazarurwa 13: 16-17. Pano tinoudzwa kuti CHIKARA "waida kuti munhu wose-vaduku nevakuru, vafumi nevarombo, vakasununguka nevakasungwa, kuti vapiwe mucherechedzo muruoko rworudyi kana pahuma. Uye hapana aigona kutenga kana kutengesa chinhu pasina kuti MAKO, chakanga MUNOGONA THE zita rechikara kana chiverengo  rinomirira ZITA RAKE "(BSN). Naizvozvo rugwaro urwu zvinoita zvakakwana pachena kuti chiratidzo Chechikara chinongova kana zita rechikara kana chiverengo kuti anomirira zita rake. Naizvozvo, vane chiratidzo chechikara pamusoro pako kwakafanana ane zita rechikara pamusoro pako (kana NUMBER inomiririra rake zita-666!).
Asi nei nhamba 666? nhamba iyi sei anomiririra zita rake? Eya, ngationei regai Bhaibheri kupindura mubvunzo iwoyo. Zvakazarurwa 13:18 (LB) - "... vanhu kusanganiswa tsika mavara muzita rake kuwedzera 666." Rugwaro Izvi zvinoratidza pachena kuti 666 kunongova kusanganiswa Verengai kukosha zita rechikara! Somuenzaniso, tora zita "VIX." Kana tikashandisa "sezviverengo Roman" Ipapo V = 5, I = 1, & X = 10. Zvadaro kana tinoisa vakakwira kusanganiswa ukoshi tsamba imwe neimwe iri zita (5 + 1 + 10) patinokura 16. Naizvozvo, Vix zvaisagona Chipuka nokuti zita rake chete anowedzera kuti 16 (apo zita rechikara kuchawedzera kusvika 666). Asi kana Vix haazi Chipuka, ndiani?
Saka ndiani Chikara ichi (i.e. kwaAntikristu)? Ko mumwe United European Superpower (a ukavandudzwa "Vatsvene" Roman Empire) sezvo vamwe unodzidzisei? Kana Chipuka mutungamiri ichi chakava ezvinhu? Chikara ndeyokufananidzira zvose-zvose umambo uye mutungamiri waro! Asi pakutanga nezvarinomiririra yayo MUTUNGAMIRIRI. Kuti aratidze kuti zvarinomirira yokupedzisira enyika mutungamiriri ino nokukurumidza-kuuya ngativhurei mumwe Gwaro mubhuku raZvakazarurwa. Zvakazarurwa 19: 20- "Ipapo chikara yakatorwa, uye pamwechete naye nomuprofita wenhema .... vaviri ava vakakandirwa vari vapenyu mugomba remoto unopfuta nesarufa "(NKJ). Gwaro iri rinoratidza zvakajeka kuti CHIKARA anomirira kupera-nguva EGA, nokuti iye muprofita wenhema vari mudziva remoto!
CHAIWO, CHAIZVO MAKO?
Asi chii chaizvo chiri mucherechedzo CHIKARA, chiratidzo yokupedzisira mutungamiri ino enyika? Uchava MUMUVIRI, chaiwo MARK (kana uri mucherechedzo ichi chete dimikira, kuva zvakavigwa dzimwe mhando, usingaonekwi rinoreva)?
Mucherechedzo wechikara chichabudirira zvechokwadi. kuva chaiyoiyo chaiko chiratidzo! Muna Zvakazarurwa 13:16 & 14:11 shanduro dzakawanda siyana dzeBhaibheri (BSN, NOG, EXB, NEB, & kuti JB) mamiriro kuti chiratidzo CHIKARA achava "vakapiswa" riri vanhu. The AMPC, BSN, & kuti EXB hurumende kuti chiratidzo Chechikara achapiwa ndokutsika pamusoro pavanhu. Asi Ndinofarira nzira Bhaibheri Living anoshandurwa idzi ndima mbiri zvakanakisisa, sezvo anozivisa kuti chiratidzo CHIKARA achava "nyora" riri vanhu! Asi zvisinei kana chiratidzo mhuka vakapiswa, nokutsikisa, kana nyora, vose shanduro idzi vachibvumirana vanobvuma kuti chiratidzo richava chaiyoiyo MUMUVIRI MAKO kuti vamwe nyore kukwanisa kuona!
KUGAMUCHIRA MARK = MUTEVERI SATANI!
Kana ukaverenga bhuku raZvakazarurwa vanyatsohuongorora (kunyanya chitsauko 14) uchaona kuti munhu AIDA anogamuchira chiratidzo chechikara kwakaomarara kurangwa naMwari. Asi Mwari zvirokwazvo HAVAZOZVIZIVI kuranga munhu ane mucherechedzo ichi muviri kumanikidzwa pamusoro pavo, kana iye acharanga munhu asingazivi anogamuchira mucherechedzo uyu (sezvo vamwe rangano theorists kudzidzisa)! Munhu anofanira vachiziva, AIDA BVUMA MAKO.
Asi ani naani AIDA uye vachiziva anobvumira mucherechedzo wechikara kuiswa muviri wake (kana paruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo) achange zvakananga pamusoro Mwari! Pane kuteerera Musiki wavo, ivo vachava pachinzvimbo kuva kuteerera Satani! Vachava Chaizvoizvo kuva pledging kuvimbika kwavo uye kuvimbika kwavo kuna Satani Dhiyabhorosi (ona Zvak 13:16 muna zvose BSN & EXB shanduro dzeBhaibheri)! Uye vaya vanoita vachabvumirwa zvakasimba kurangwa naMwari! Uye ivo vachava nemanzvengero; nokuti kwete chete zvichavapo zvapupu zviviri (kana vaporofita) uyo udza kwete kunamata Chipuka (kana chifananidzo chake) kana kugamuchira mucherechedzo wake kwavari, asi ngirozi kudenga vachakuitiraiwo kuraira vagere munyika kwete kuita kudaro (Zvakazarurwa 14: 9)!
Saka, chii zita Chechikara? Uye ndiani magumo-nguva mutungamiri ichi enyika kuva? Ani naani ari mumwe chinhu Tinozviziva, mabhii zita rake kuchawedzera kusvika 666! Asi unogona munhu kufunga zita nani kupfuura ROMAN?
Chokutanga, "ROMAN" rinogona kushandurwa kuti "LATEINOS" mumutauro wechiGiriki. (Asi nei vanoshandisa mutauro wechiGiriki? Nokuti vakawanda Testamende Itsva pakutanga yakanyorwa nechiGiriki-kusanganisira bhuku raZvakazarurwa). Mumutauro wechiGiriki "L" anomiririra nhamba 30, "A" ari 1, "T" ndiyo 300, "E" ndizvo 5, "Ini" ari 10, "N" ari 50, "O" 70, uye " S "ari 200. Add kundovaisa (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) uye chii iwe kuwana? 666!
Chechipiri, kana zita rake aiva "ROMAN," zvingava yakafanana dzidziso yeUtatu sezvaringaita kumirira zvinhu zvitatu mune imwe. Kwete chete kaisazova zita iri yokupedzisira-nguva mutungamiriri wezvematongerwe enyika, asiwo vaizomiririra hweRoma uyewo MUROMA (Catholic) Church.
Hazvinei nezvaunoita mune ramangwana, HAKUNA (chero zvaita zvose!) Kugamuchira chiratidzo chechikara kana vanomunamata (i.e. kwaAntikristu) kana chifananidzo chake !!!
"Vana vaduku, iawa yokupedzisira; uye sezvo makanzwa ... kwaAntikristu anouya ... The munhu chivi ... mwanakomana wokurashika, unopikisa nekuzvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa ... Achaita kunyange kugara tembere yaMwari, achiti iye pachake ndiye Mwari "(1 Johani 2:18 NKJ; 2 VaT 2: 3-4 NKJ; 2 VaT. 2: 4. BSN).
"Ipapo akazarura muromo wake chimhure Mwari, kuti chimhure zita rake, tabhenakeri rake, uye vaya vanogara kudenga. Uye rakabvumirwa kwaari kuti hondo nevatsvene [vaKristu YECHOKWADI] uye kukunda [hwaizoikunda] kwavari. Uye simba rikapiwawo kwachiri pamusoro perudzi rwose nerurimi nerudzi. Uye vose vanogara panyika vachachinamata, vane mazita asina kunyorwa mubhuku roupenyu ... "(Zvak 13: 6-8 NKJ).
"Kana munhu akanamata chikara [i.e. kwaAntikristu] nomufananidzo wake [i.e. ake pechifananidzo], uye anogamuchira mucherechedzo pahuma yake kana paruoko rwake, iye amene anofanira uyewo waini yekutsamwa kwaMwari, yakadirwa simba rizere mumukombe wekutsamwa kwake. Uye ucharwadziswa nemoto nesarufa pamberi pevatumwa vatsvene uye pamberi peGwayana [i.e. Jesu Kristu]. Zvino utsi hwokurwadziwa kwavo hunokwira nokusingaperi-peri, uye havana zororo masikati kana usiku, ivo vanonamata chikara nemufananidzo wacho, nani nani unogamuchira mucherechedzo wezita "(Zvak 14: 9-11 NKJ).
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro mucherechedzo wechikara, tapota verenga "Zvakazarurwa Runouya Mupenyu" uye mabhuku aya anowanikwa FREE pa "Munhu Anopesana naKristu & The Final 7 Makore.": www.TheBibleComesAlive.com
shona = shona
Kana uchida kuverenga chero nyaya yangu kana mabhuku mumutauro wenyu, chete tinya anotevera kubatana: https://translate.google.com. Link Izvi zvichaita kushandura vose zvinyorwa wangu Chirungu kuti mutauro wako. Asi unogona chete kushandura 1 peji panguva.